Akụkọ - Fụọnụ na ọgbakọ mgbochi ọrịa na-akpọ oku! OK na-emepụta ụdị 200 nke ihe eji emepụta nkpuchi kwa ọnwa!
Ebe ọ bụ na Ọkammụta Zhong Nanshan kwupụtara ọkwa mmadụ na mmadụ nke coronavirus ọhụrụ Wuhan na CCTV na Jenụwarị 20, 2020, ọrịa Wuhan emetụtala obi mmadụ ijeri mmadụ 1.4 nke China. Mgbe ị na-a attentiona ntị na ntiwapụ nke ọrịa ahụ, onye ọ bụla amalitela ilebara ahụike na nchekwa nke onwe ha na nke ezinụlọ ha anya. Na Jenụwarị 21, ihe nkpuchi Hubei adịghịzi, mgbe ahụ ihe nkpuchi dị ụkọ n'ofe mba ahụ, ha enweghị ngwaahịa, na-eme ka adịgboroja jupụta n'ahịa ahụ.
Na 2019, mmepụta nke ihe nkpuchi nwere ike iwepụ na China bụ ijeri ijeri 4.5 kwa afọ, na nkezi nke maski 3.2 kwa afọ. Ebe ọ bụ na ndị China enweghị omume nke iji ihe nkpuchi kwa ụbọchị, a na-ebupụ ọtụtụ mkpuchi ihu anyị na mba anyị. Kemgbe ntiwapụ nke coronavirus ọhụrụ na Wuhan, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịzụta ihe nkpuchi na-eyi ihe nkpuchi kwa ụbọchị. Ihe omume a emeela ka ndị mmadụ kpọtere ya ma mee ka ha mara nchedo onwe ha. Ojiji nke ihe nkpuchi nwere ike ichupu ihe gha abu kwa onodu. N’ọdịnihu, ihe a na-achọ maka masks nwere ike ịchụfu n’obodo m bụ ijeri 51.1, ụkọ 46,6 dabere na iji otu onye n’isi na ụbọchị iri, nke pụtara na ihe a na-achọ ga-arị elu karịa ugboro iri n’afọ a na n’ọdịnihu.
Ok Technology-China na-eduga akụrụngwa akụrụngwa na-eweta ihe ọhụụ!
ụlọ ọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-ebute ụzọ n'inye RMB 1 nde ego.
mbụ ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nnyocha na ịzụlite disposable nkpuchi mmepụta akara, disposable nkpuchi otu-ibe, bundling akpa, katọn na ikpe mbukota mmepụta akara.
Na nzaghachi maka oku nke ndị otu na ndị gọọmentị, ndị Ọ dị mma na-arụ ọrụ ehihie na abalị iji lụso ọrịa ọgụ coronavirus ọhụrụ ahụ wee mechaa nwee ike ịmịpụta ụdị 200 nke ihe eji emepụta ihe nkpuchi kwa ọnwa iji gboo mkpa ahịa nke ahịa.